Jyoti Magar (ज्योति मगर) Singer and model
Topic: Jyoti Magar (ज्योति मगर) Singer and model
Author Topic: Jyoti Magar (ज्योति मगर) Singer and model (Read 70484 times)
Re: Jyoti Magar (ज्योति मगर) Singer and model
« Reply #10 on: August 21, 2015, 01:08:49 AM »
« Reply #11 on: August 23, 2015, 10:26:32 PM »
« Reply #12 on: August 26, 2015, 01:40:16 AM »
« Reply #13 on: August 31, 2015, 03:14:31 AM »
मै राम्रि भन्छन्
मै सेक्सि भन्छन्
Quote from: sag on August 30, 2015, 03:33:35 PM
« Reply #14 on: September 03, 2015, 10:35:28 AM »
Quote from: sag on August 31, 2015, 03:14:31 AM
« Reply #15 on: September 08, 2015, 03:23:49 PM »
Interview -- http://badmasi.com/jyoti-magar-says-dhamala-ji-bikini-doesnt-suit-me/
« Reply #16 on: January 28, 2016, 05:17:01 AM »
लोकगायिका ज्योति मगर भन्छिन्–सेक्सी हुँ, भल्गर होइन
वक्षस्थल देखिएको’ भन्दै नेपाल टेलिभिजन प्लसले रेकर्डेड अन्तर्वार्ता सेन्सर गरेपछि लोकदोहोरी गायिका ज्योति मगर विवादमा तानिइन् । हिमालयन टेलिभिजनका लागि रेकर्डेड उनी गेस्ट रहेको ‘जोगेन्द्रके पान दुकान’ कार्यक्रम पनि पोसाककै कारण रोकियो । केही दिनअघि एक अनलाइनका लागि गरेको उत्तेजक फोटोसुटका कारण अहिले पनि उनी चर्चामै छिन् । भन्छिन्, ‘एनटिभीमा अन्तर्वार्ता दिँदा लगाएको पोसाक र अनलाइनका लागि गरेको फोटोसुट सामान्य हो ।’
ज्योतिले फेसबुक अकाउन्टमा अपलोड गरेका उनका पछिल्ला तस्बिरले पनि उनी छोटा लुगा मन पराउँछिन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । सेक्सी देखिन सक्दो कोसिस गर्छिन् । मिनिस्कट, गाउन, वानपिस उनको नियमित पोसाक हुन् । एनटिभीमा अन्तर्वार्ता दिँदा उनी गुन्युचोलीमा थिइन् । ‘वक्षस्थल देखिएको’ भन्दै प्रसारण रोकियो । ‘नेपाल टेलिभिजनप्रति मेरो बेग्लै सम्मान छ, त्यही भएर त्यस दिन गुन्युचोली लगाएर गएकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘स्कट, गाउन, वानपिस त्यागेर गुन्युचोली लगाएर गएकी थिएँ, त्यही पनि विवादमा आयो ।’ आफ्नो चोलीको क्लिवेज ओपन भएको भने उनी स्वीकार गर्छिन् ।
‘चोलीको क्लिवेज ओपन हुँदा थोरै क्लिवेज देखिएको थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, वक्षस्थल देखाएको थिएन । वक्षस्थल देखाउनु र क्लिवेज देखिनु फरक कुरा हो ।’ आफ्नो पोसाकमाथि सेन्सर गर्ने महिलाहरूले समेत पार्टीमा जाँदा क्लिवेज ओपन गर्ने उनको जिकिर छ । भन्छिन्, ‘सबैको डिजाइनर ब्लाउज हुन्छ, त्यही भएर पनि उहाँहरू, सरकारी निकायमा काम गर्ने महिलाहरू पार्टीमा जाँदा क्लिवेज ओपन राख्नुहुन्छ ।’
अन्तर्वार्ता रेकर्ड हुँदा क्यामेराले आफ्नो ओपन रहेको क्लिवेजमाथि ‘फोकस’ गरेको हुनुपर्ने ज्योतिको अनुमान छ । जसले क्लिवेज ओपनको भाग वक्षस्थलजस्तो देखियो । ‘सायद क्यामेराले फोकस गरेको हुनुपर्छ, मैले धेरैपटक त्यो पोसाकमा अन्तर्वार्ता दिएकी छु, कसैले केही भनेका थिएनन्, मेरो त त्यो एकदम एभरेज पोसाक हो । गुन्युचोली लगाउँदा आपत् हुन्छ भने अब म के लगाउँ ?’ उनले स्पष्टीकरण दिन खोजिन् ।
उनले वक्षस्थल देखिनु र क्लिवेज ओपन हुनुको परिभाषासमेत दिइन् । ‘क्लिवेज भनेको देखिन–देखिन खोज्ने, तर नदेखिने मात्र देखिनु हो । वक्षस्थल भनेको पूरै देखिनुलाई भन्छ’, उनले भनिन्, ‘क्लिवेजभित्र कसरी पस्यो क्यामेराको फोकस ?’
त्यस दिन अन्तर्वार्तामा सहभागी अरू महिलाहरूले आफ्नो पोसाकको तारिफ गरेको पनि ज्योतिले सुनाइन् । ‘सिनियर दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले राम्रो छ भन्नुभएको थियो, अन्तर्वार्ता लिने शोभा त्रिपाठी, क्यामेराम्यानले पनि ड्रेसको बारेमा केही भनेका थिएनन्,’ उनले भनिन् ।
अन्तर्वार्ता रोकिँदा ज्योतिलाई कुनै तनाव नभए पनि त्यसको असर भने भोगिन् । वानपिसमा रेकर्ड गरेको हिमालयन टेलिभिजनको कार्यक्रम पनि रोकियो । ‘त्यस दिन नेपाली पोसाक नभएर गाउनमा थिएँ । अलिक ओपन नै थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यो कार्यक्रम पनि रोकियो, एनटिभीले प्रसारण रोकेकाले हिमालयनले पनि रोकेको रे ’
‘पान पसल’ कार्यक्रमका लागि प्रस्तोताले ‘जस्तो पोसाकमा आए पनि हुन्छ’ भनेर हिमालयन टिभीमा निम्त्याएका थिए । ‘मलाई धेरैले सेक्सी भनेर चिन्ने भएकाले होला कार्यक्रम प्रस्तोता जोगेन्द्र (शिवशंकरप्रसाद रिजाल) ले तिमी आफ्नै टाइपको ड्रेसअपमा आऊ भन्नुभएको थियो । तैपनि, म दुईवटा ड्रेस बोकेर गएकी थिएँ । उहाँले नै भन्नुभयो, यो ड्रेस (गाउन) लगाऊ भनेर,’ ज्योतिले सुनाइन्, ‘त्यहाँ रोकिनुको कारण एनटिभीले रोकिराखेकाले रहेछ । त्यतिवेला प्रसारण गर्‍यो भने हामीलाई ढुंगा हान्ने हुन् कि भनेर रोकेका रहेछन् ।’ उनले त्यही पोसाकमा अन्य टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदा नकारात्मक प्रतिक्रिया नआएको दाबी गरिन् ।
विभिन्न ठाउँमा गाउँदा वा नाच्दा ज्योति पोसाकमा ध्यान दिन्छिन् । कुन प्रकृति र उमेर समूहका मान्छे छन् भन्ने ख्याल गरेर पोसाक छनोट गर्छिन् । ‘टिनएजरहरूले गरेको कन्सर्टमा स्कट लगाएर जान्छु,’ उनले भनिन्, ‘सोसाइटीलाई ख्यालमा राखेर आयोजना गरिएको कार्यक्रम, राष्ट्रिय मिडियाबाट ‘लाइभ’ हुने कार्यक्रममा साडी र गुन्युचोली लगाएर जान्छु ।’
आफ्नो पोसाकका बारेमा मिडिया, चिनजानका व्यक्ति, फ्यान र सर्वसाधारणलगायतबाट ज्योतिले मिश्रित प्रतिक्रिया पाउने गरेकी छिन् । ‘मेरो लुगाको बारेमा विभिन्न टिप्पणीहरू हुन्छन् । ७५ प्रतिशतले राम्रो भन्छन्, मेरो ड्रेस अलि अट्रयाक्टिभ, सेक्सी हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू सुनिन्छन्’ आफ्नो लुगाका बारेमा आफूसम्म आइपुग्ने टिप्पणी उनले सुनाइन्, ‘एक–दुईजना अलि कन्जरभेटिभ सोच राख्नेहरू ड्ेरसअप सुधार्नुपर्‍यो भन्छन् ।’
आफ्नोबारेमा आउने कमेन्टहरू राम्ररी बुझेर मात्रै स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने गरेको ज्योतिले बताइन् । ‘मलाई कसले कमेन्ट गरिरहेको छ, त्यसलाई हेर्छु पहिला । र, ऊ कत्तिको सही छ त्यो हेरेर मात्र कमेन्टलाई स्वीकार गर्छु,’ उनले भनिन्, ‘कतिपयले ज्योति केटाजस्ती भएर हिँडिरहेकी हुन्छे भन्छन्, तर उनीहरूले खुसुखुसु नाजायज काम गरेका हुन्छन्, तिनीहरूको कमेन्टलाई मैले कसरी एसेप्ट गर्ने ?’
आफूलाई मोडलसमेत भन्न रुचाउने ज्योतिले कतिपय मोडलको न्युड फोटो देखेको बताइन् । ‘मलाई एक–दुईवटा स्टुडियोमा फोटोसुटका लागि बोलाइयो, कस्तो फोटो खिच्ने भनेर क्यामेराम्यानले नेपालका केही मोडलका तस्बिर देखाए,’ उनले सुनाइन्, ‘उनीहरूको फोटो न्युड नै थियो, त्यसलाई भल्गर भन्नैपर्छ, तर ती फोटोहरू आउट भएका छैनन् ।’
आफूले पछिल्लोपटक गरेको फोटोसुट सेक्सी मात्र भएको ज्योतिको दाबी छ । ‘कुन अवस्थामा सौन्दर्यता झल्कन्छ भन्ने हो, सौन्दर्यताका लागि फोटोसुट गरेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसलाई भल्गर भन्न मिल्दैन ।’ उनको फोटोमा वक्षस्थल थोरै मात्र छोपिएको देखिन्छ ।
ज्योतिले आफूलाई ‘स्टाइलिस’ ठान्छिन् । ‘कतिपय मोडलको फोटो न्युड, सेमी न्युड हुन्छन्, म त्यसलाई भल्गर भन्छु । मैले लगाउने कपडा त सेमी न्युड पनि होइन, म आफूलाई स्टाइसिल मात्रै भन्छु,’ उनले भनिन् ।
« Reply #17 on: January 28, 2016, 05:18:13 AM »
ज्योति मगर, अश्लीलता र ढाडे बिरालोहरु
पहिलोपोस्ट - | 24th August 2015 | ७ भदौ २०७२
आजकल संगीत बजारमा ज्योति मगरको चर्चा छ। ‘ढाडे बिरालो’ बोलको तिज गीतमा गरेको अभिनय/नृत्यका कारण उनको चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ। आलोचना कै माझ युट्युबमा उक्त गीतको ६ लाख दर्शक मध्ये म पनि एक भएँ। मलाई गीत हेरेर कुनै धारणा धारणा बनाउनु थिएन । बस जान्नु थियो कि ‘ढाडे बिरालो’ बोलको गीत किन यति धेरै आलोचनाको शिकार भएको छ । हेरेँ र छाडिदिएँ। धारणा बनाउन आवश्यक ठानिनँ।
गीत हेरेको केही दिनपछि फेसबुक टाइमलाइनमा एउटा लिंक भेटेँ- ज्योतिको अन्तर्वार्ता। शीर्षक थियो- ‘आरोप लगाउनेलाई ज्योति मगरको जवाफः जो आदर्शका कुरा गर्छन्, सबभन्दा ढोँगी तिनै हुन्’। जल्दाबल्दो विषय भएका कारण उक्त अन्तर्वार्ता नहेरी रहन सकिनँ। ज्योति मगरलाई लक्षित गरेर रामप्रसाद खनालको अभिव्यक्तिपछि ज्योतिले छोरीबुहरीको कुरा छाडेर कसरी प्रतिकार गर्लिन् भनेर जान्न मन लागेको थियो । उत्तर त्यहाँ भेटिन्छ कि भनेर सरासर अन्तरवार्ता पढ्दै गएँ।
उनको एउटा तर्कले ध्यान खिच्योः यो भन्दा अघिको तीजको गीत ‘टिपन सकिन खाइन बरिलै’ मेरा आमाहरुको पालमा गाउने गीत हो। त्यसरी नै गाएको छु, भेषभुषा पनि परम्परागत नै छन्। खै त त्यसको चर्चा गरेको? अपेक्षा चाहिँ ढाडे बिरालोको गर्ने, अनि गाली पनि गर्ने? एकपटक सोच्नुपर्‍यो उहाँहरुले आफूलाई गाली गर्‍या कि मलाई?
यति धेरै आलोचित ‘मोडल कम गायिका’ ले आफ्नै तिजको गीतको उदाहरण दिए पछि कहिल्यै शब्दै नसुनेको गीत नहेरी रहन सकिनँ। युट्युबमा सर्ज गरेँ। गीत ज्योति मगर र प्रिती आलेको स्वरमा सजिएको रहेछ र अभिनय पनि उनीहरुको नै।
​तर अचम्म तलदेखि छोटो लुगामा रातै भएर सुन्दा पनि कस्तो कस्तो लाग्ने गीतमा अभिनय गरेकी ज्योति मगरको यो अभिनय र गीत दुबै भिन्न थियो। हरियो सारी र रातो चोलोमा सजिएर ज्योति मगर त्यस्तो गीत गाएर नृत्य गर्दै थिइन् जुन साच्चिकै लोक गीत थियो। अनि हाउभाउ र नृत्य उक्तिकै राम्रो। नेपाली लोक गीतमा राम्रो नृत्य भएको गीत मध्ये एक होला झैं लाग्यो मलाई।
तर अचम्म त्यति राम्रो गीत जम्मा नब्बे हजारले हेरेका थिए। तर ‘घिन लाग्दो, संस्कृति बिथोल्ने, लोक गीतको मर्म मार्ने’ भनिएको गीत चाँहि यो गीत भन्दा ५ औं गुणा बेसी हेरिएको थियो।
अनि फेरि अन्तर्वार्तामा ज्यति मगरले भनेको कुरा आयोः ‘लोकसंस्कृतिमा विकृति भित्र्याएको आरोप जसजसले लगाउँछन्, उनीहरुले राम्रो कुरालाई कहिल्यै पनि ‘एप्रिसियट’ गर्न सकेनन्। राम्रो कुरालाई ‘एप्रिसिएट गर्ने भए त उहाँहरु ढाडे बिरालोजस्तो गीतमात्रै त हेर्नुहुँदैनथ्यो नि। उहाँहरुले मेरो ‘उही मुलाको चाना’ हेर्नुहुन्थ्यो, ‘मायासँग’ भन्ने एल्बम हेर्नुहुन्थ्यो। उही मुलाको चानाले मलाई ज्योति मगर बनाएको हो। जसले अहिले ‘ढाडे बिरालो’ को आलोचना गर्नुभएको छ, उहाँहरुले हिजो ‘उही मुलाको चाना’ लाई ‘एप्रिसिएट’ गर्नुभयो त?’
एउटा प्रश्न दिमागमा आयो- ज्योति मगर गलत हुन् वा हाम्रो समाजको चरित्र? भन्छन् लोकगीत लोकको गीत हो यानेकी समाजको गीत । उसोभए लोकगीत समाजको विचार, चरित्र र कृयाकलापबाट सिर्जना हुन्छ होला। अनि समाजको परिवर्तनसँगै लोक गीतको पनि स्वरुप पनि फेरिँदै जान्छ होला। समाज चलायमान छ र त पहिलेका लोक गीत र अहिलेका लोक गीतमा भिन्नता आएको छ। सायद ज्योतिले अभिनय गरेको गीत पनि त्यही भिन्नताको एउटा उदाहरण हो।
नत्र यी र यस्ता गीतहरु ‘भ्याक्युम’ मा रहन त सक्दैनन् । जुनसुकै सिर्जनाका पनि कुनै न कुनै सिजर्नास्थल हुन्छन् र प्रेरणाका स्रोत पनि। कसैले भन्ला- त्यत्तिकै हावामा हाम्रो समाजलाई नै सिर्जनास्थल र प्रेरणाको स्रोत भन्न सकिन्छ भनेर। तर युट्युबमा उक्त भिडियो हेर्ने ६ लाख संख्या के हो त? अब त्यसमा भएका नकारात्मक टिप्पणीको कुरा आयो। यौन र अश्लीलताको विषयमा मान्छे स्वभाविक रुपमा नकारात्मक बन्दिन्छन्। तर भारतमा पोर्न वेबसाइटमा रोक लगाउन खोज्दाको जल्दोबल्दो उदाहरण भने अलि फरक छ।
अहिलेको अवस्थामा लोक गीत नेपाली संगीत क्षेत्रको मुख्य बजार हो। यस बिचमा गीत निकालेपछि बजारमा कसरी चल्ने र चलाउने भन्न ध्याउन्न हरेर कलाकारलाई हुन्छ नै। सायद यही कुरा ‘ढाडे बिरालो’ गाउने गायकगायिका, रचनाकार, संगीतकारदेखि लिएर सबैलाई थाहा थियो। उनीहरुलाई राम्रोसँग थाहा थियो बजारमा के चलेको छ, के चल्न सक्छ र चलाउनलाई के गर्नुपर्छ।
भूकम्प आउने बित्तिकै नेपालका कुनाकाप्चामा ‘हामी फेरि उठ्नेछौं’ भन्ने नारा लेखिएका टिसर्ट छ्यापछ्याप्ती आएका थिए। ती किन आएका थिए त? किनभने व्यापारीलाई थाहा थियो- समाज त्यो चाहान्छ र मान्छेले त्यही किन्छन्। हो, त्यस्तै लाग्छ गीतको बजार पनि । नत्र किन बजारमा मायाप्रेमका गीत नै धेरै हुनछन्। किनकी बजार त्यही चाहन्छ।
हो, ‘ढाडे बिरालो’ को कथा पनि त्यस्तै हो। यदि राम्रो भएर चलाउन सकिँदैन भने केही ‘ट्विस्ट’ नै सही भन्ने मान्यता उत्पादकमा हुन्छ। नत्र गीतको शब्ददेखि अभिनय सबैमा एकरुपता किन? किनकि बजारमा त्यही चल्छ। गीतको निर्माण युनिटले त्यही कल्पना गर्‍यो र बनायो। ज्योति त त्यसको एउटा सानो हिस्सा मात्र हुन् तर पनि पुरै दोष उनकै टाउकोमा छ।
गीत लेख्ने रचनाकार, संगीतकार, गाउने गायकगायिका, निर्देशकलाई किन कुनै प्रश्न गरिएन? किनकी सबैको परिकल्पनाको मुर्त रुपमा ज्योतिमा छ। उनी प्रत्यक्ष देखिन्छिन् तर अरु देखिँदैनन्। तर ज्योतिसँगै नाच्ने दुई पुरुष कलाकार त देखिन्छन्। किन कसैले उनीहरुलाई भन्दैन- नेपाली चेलीसँग त्यस्तो नाच नाँच्न तिमीहरुलाई लाज लाग्दैन?
सुरुमा ज्योति मगर र उनको रोजाइप्रति मेरो कुनै धारण थिएन। तर अहिले लाग्छ- उनी गलत छैनन् र धेरै कुरामा प्रशंसा गर्न योग्य छन्। किनभने उनले बजारलाई राम्रो बुझेकी छन्। बजारमा टिक्न चर्चा कमाउनु पर्छ र चर्चा उनलाई ‘ढाडे बिरालो’ ले दिएको छ। जसले उनलाई गाली गर्छ त्यसले उनलाई हैन समाजलाई गाली गरेको हो। लाग्छ, त्यो गाली युट्युबमा ‘ढाडे बिरालो’ हेर्ने ती ६ लाख व्यक्तिलाई हो, जसले आनन्द मानेर गीत हेर्छन् तर जाने बेलामा मुख भरी गाली दिन भ्याउँछन्। सायद गीतले भनेका ‘ढाडे बिरालो’ पनि यस्तै मान्छेहरु हुन्।
ज्योति त आफैंमा ठिक छन्। उनले समाजको माग पुरा गर्दै बजारमा टिकेकी छन् र अगाडि लिएर गएकी छन् हाम्रो संस्कृतिलाई। त्यसैले त गाएकी छन्- ‘टिप्न सकिन खाइन बरी लै’ जुन साँच्चै हाम्रा पाखापखेरामा गुन्जेका छन्, चाहे त्यसलाई युट्युबमा जम्मा ९० हजारले मात्र किन नहेरेका हुन्।
बरु अर्को प्रश्न दिमागमा आएको छ- हाम्रो सोचमा नै खोट नभए हामी किन ‘ढाडे बिरालो’ हेर्छौँ तर ‘टिपन सकिन खाइन बरी लै’ हेर्दैनौं? यदि हामीले त्यो हेर्न थाल्यौं भने त कसैले पनि ढाडे बिरालो बनाउँदैन थिए होलान् नि। यदि समाजमा त्यसको चर्चा भैदिएको भए पुनः ‘टिपन सकिन खाइन बरी लै’ जस्तै गीतहरु बन्थे होला।
ज्योति मगरलाई यदि कसैले गाली गर्ने अधिकार राख्छ भने ती हुन्- जसले ज्याति मगरको ‘टिपन सकिन खाइन बरी लै’ हेरेका छन् र साँच्चै मन पराएका छन्। सिक्काको एउटा पाटो हेरेर धारणा बनाउने ‘ढाडे बिरालो’ का बारेमा कुरा नगरौँ।
« Reply #18 on: January 28, 2016, 05:20:04 AM »
'सिंगल छु भने ''एस'' भन्छु' :ज्योति मगर लोकगायिका
मङ्गलबार २२ भाद्र, २०७२
सेक्स प्रेम गर्ने र माया दर्शाउने माध्यम हो ।
प्रेममा सेक्स कति आवश्यक छ ?
प्रेमलाई सेक्सले पूर्णता दिन्छ ।
सेक्समा तपाईंलाई मन पर्ने क्रियाकलाप के हो ?
म 'फोरप्ले' धेरै इन्जोय गर्छु ।
कस्तो अवस्थामा तपाईंलाई सेक्सको चाहना हुन्छ ?
त्यो मेरो मुडमा भर पर्ने कुरा हो । जुनसुकै बेला पनि हुन सक्छ ।
कुनै क्रेजी फ्यानले तपाईंसँग सेक्सको प्रपोज ग¥यो भने ?
म रिलेसनमा छु भने 'नो' भन्छु, सिंगल छु भने 'एस' भन्छु ।
तपाईं कुन सेलिब्रिटीदेखि भुतुक्कै हुनुहुन्छ ?
भीजे सुरजसिंह ठकुरी भनेपछि भुतुक्कै हुन्छु । उहाँको व्यक्तित्व पनि भव्य छ । उहाँको भिजेइङ स्टाइल एकदम सेक्सी लाग्छ ।
प्रस्तुतिः जयन सुब्बा मानन्धर
« Reply #19 on: January 28, 2016, 05:24:21 AM »
सेक्सलाई राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नु पर्छः ज्योति मगर
लोक गायिका ज्योति मगर लोक गायन क्षेत्रमा धेरैले चिन्ने नाम हो । कतिपयले उनलाई गायनले भन्दा अंग प्रदर्शनले बढी चिनाउन खोजेको भनेर आरोप पनि लगाउँछन् । कतिपय कार्यक्रममा उनले लगाएका पहिरन र प्रस्तुती साह्रै उत्ताउलो भएको भन्ने टिप्पणी समेत भए । नेपाल टेलिभिजनमा उनको अन्तरवार्ता नै रोकियो । आफ्नै विषयमा उनको भनाइ चाँहि के छ त? नेपाली हेडलाइन्सले गायिका ज्योति मगरसँग गरेको कुराकानीको संपादित अंशः
आजभोली के मा व्यस्त हुनु हुन्छ ?
–यता उता कार्यक्रम, कन्सर्ट यस्तै । भ्याइ नभ्याइ नै त छैन् । तर नर्मल रुपमा चलिरहेको छ ।
पछिल्लो गीत कुन निकाल्नु भो ?
–पिरतीमा दम छ । अब तत्काल नै रोइला रिलिज हुँदै छ । चाँडै नै सार्वजनिक हुन्छ ।
कहिलेदेखि गीत गाउन थाल्नु भयो ?
–प्रोफेसनलरुपमा ०६२/०६३ सालबाट सुरु गरेको हुँ ।
यस क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नु भो ?
–रहरले प्रवेश गरे । स्कुल पढ्ने बेला स्कुलमा हुने दोहोरी प्रतियोगिता । त्यसपछि विभिन्न दोहोरी प्रतियोगीता र एसएलसीपछि काठमाडौं आएपनि निरन्तर रुपमा सुरु गरें ।
Jyoti Magar 1
पहिलो एल्बम कसरी आयो? शुरुमा एल्बम कसरी निकाल्नु भो ?
–०६३ बाट रेकर्डिङ सुरु भएर ०६४ सालमा आइपुग्दा भिजियुलसम्म भएको थियो तर सार्वजनिक नै भएन । नयाँलाई प्राथमिकता दिइएन । कम्पनीहरुको लागि सायद मेरो गीत फिट भएन कि ? दोस्रो ,मायासँग र तेस्रो यही मूलाको चानाले स्थापित गरायो ।
लोक गायिका हुन कति सजिलो छ ?
–पहिला आउन आह्रो थियो । अडियो क्यासकेटमा सबैले चिन्थे । अहिले अलिकता पैसा भयो आउन सजिलो छ । टिक्न धेरै गाह्रो छ । धेरै मान्छेहरुले चिन्न गाह्रो छ ।
तपाई स्थापित हुनुभयो त ?
छैन, संघर्षमै छु ।
गायिका भएर बाच्न सकिने अवस्था छ ?
–कसरी जिउन चाहान्छौं भन्ने कुरा हो । जे छ त्यसमा जिउने हो भने हात मुख जोडन पुग्छ । घर किन्ने र गाडी किन्न गाह्रो छ ।
Jyoti Magar 2
तपाईलाई उत्ताउलो गायिका भन्छन नि त ?
– त्यस्तो भन्नेहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । उत्ताउलो भन्नाले समाजमा पच्ने कि नपच्ने कुरा आउँछ । मरो गीत सभ्य भाषामा बनाइएको छ । सेक्सलाई मिठो तरिकाले प्रस्तुती गरिएको छ । त्यो हिसाबले पच्छ । अहिलेसम्म त्यसलाई पचाएकै छन् । फुयुजन गर्ने हिसाबले नै सेक्सी टाइपको गीत बनाएको हुँ ।
लोक गीतमा सेक्स भन्ने कुरा त्यति धेरै आउँदैन तपाइँले त जवर्जस्त ल्याउनु भो नि हैन ?
–कसरी ? जिम्माल वाउकी छोरी सुन्न भएको होला । त्यस गीतमा एउटा पार्ट यस्तो छ–
कालो रातमा रमाइलको रंग भो
जे हुनुथ्यो मायालुसँग भो
जिम्माल बाउकी छोरी अध्याँरोमा ला’को माया काली छौ कि गोरी ?यसको अर्थ अध्याँरोमा माया लगाइयो जे भयो–भयो । तर अर्को दिन कालो थियो कि गोरो थियो थाहा नै भएन । यसलाई सेक्सी भन्ने सोच्यो भने हो । तर मलाई उत्ताउलो भन्ने लाग्दैन ।
तपाईको परिभाषामा सेक्सी भनेको चाँहि के हो ?
–सुन्दर । कसरी व्यक्त गर्ने मैले । अलिकता मिठो । थोरै भएपनि सेक्स ओरिएन्टेड । अध्याँरोमा माया लाएको टाइपको ।
तपाईको त पहिरन पनि पप गायिकाको जस्तो छ नि ?
गायक÷गायिकाले घाँटी बेच्ने हो । नाच्नेले नृत्य देखाउने हो । कलाकार भनेको मनोरञ्जन दिनेहरु नै हुन् । दर्शकलाई स्वरले होस कि पहिरनले होस कि हाउभाउले होस । म कलाकार भन्दा पनि दर्शक नै हुँ । म पनि कन्सर्टहरु हेर्छु । त्यो कुरा म पनि फिल गर्छु । उँभिएर गाएको गीत भन्दा नाचेर गाएको गीतमा मनोरञ्जन बढी हुने गर्छ ।
तपाईलाई अंग प्रर्दशन गर्ने गायिका पनि त भन्छन नि, एउटा त अन्तरवार्ता नै रोकियो होइन ?
–केही हदसम्म हो । अंग प्रदर्शन भनेको अंग देखाउनु हो । आजको फेसनलाई फलो गर्नुपर्छ भन्ने हो । यसको अर्थ यो होइन कि मेरो अंग देखाउनु पर्छ । एनटिभीमा लिएको अन्तर्वार्ता रोक्नु नै पर्ने त्यस्तो ठूलो कारण थिएन । किनकी गुन्यू चोली ओपन छ भन्दैमा अलिकति क्लिभेज ओपन छ भन्दैमा देखाउन नसक्नु त उहाँहरुको कमजोरी हो । देखाउनको लागि होइन । प्रायः ड्रेसहरुमा नेपालीपन नै हुन्छ । जापानको कार्यक्रममा पनि मैले सारी लगाएको थिए । देखाउने मानिसले स्कर्ट लाउँछ । टू पिस लाउँछ । सारी लाएर जाँदैन नि त ? मैले आधुनिक सारी बनाएको हो ।
जापानमा त उत्पातै गर्नु भो होइन ?
–जापानको कार्यक्रममा दुई वटा पोसाकमा उभिएँको थिए । पहिलो गुन्यू चोलीमा देखिएको छ । सारीमा प्रस्तुत हुँदा ग्ल्यामर त विक्री हुँदो रहेछ नि ? मिडियामा पनि नकारात्मक मात्र किन ? सकारात्मक किन आएन न त ? कुन गीतमा के लगाउने भन्ने कुरा अहिलेसम्म कानुनमा लेखिएको छैन । सबैले नेपाली पोसाकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।